नेपाली नालन्दा कहिले ? ~ Thinksphere
बिसौं शताब्दीमा भएको लोकतन्त्रको अभ्यासलाई युरोपमा उदाएको फासिवादले झ्वाप्प छोप्यो । आलोचनात्मक चिन्तन र अभिव्यक्तिका लागि सार्वजनिक वृत्त खुम्चँदै जानु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो भन्ने उबेलाका विद्वान्हरूको राय थियो । जोन डीबी र हाना आरेन्टजस्ता चिन्तकले ‘एक्लिप्स अफ द पब्लिक’ अर्थात साँघुरो बन्दै गएको आमवृत्तप्रति चिन्ता गरे ।
अमेरिकामा सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा गरिएको आतंकवादी हमलापछि आमवृत्तमा त्यस्तै असर देखिए । यी अप्ठयारा परस्थितिमा उम्दा आलोचनात्मक चिन्तन एवं वैकल्पिक दुनियाँको परिकल्पना सम्भव मानिने ठाउँ विश्वविद्यालय थियो ।
विश्वविद्यालयमा अध्ययनले खारिएका जाँगरिला युवा भेला भए । ज्ञानको आलोकमा शिक्षक र विद्यार्थी मिलेर यथास्थितिलाई चुनौती दिए । मौजुद अवस्थामा आम मानिसले कसरी दु:ख पाएका छन् भनेर अन्वेषण गरे । आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विषयमा गम्भीर अन्तरक्रिया गरेर दुनियाँ बदल्न सकिन्छ भन्ने हिम्मत सञ्चार गरे । वैकल्पिक दुनियाँको परिकल्पनालाई साकार रूप दिन विद्रोही तेवर आवश्यक छ भन्ने बोध गरे । सन् २००४ मा प्रकाशित एडवर्ड सइदको अन्तिम पुस्तक ‘हयुमानिजम एन्ड डेमोक्रेटिक क्रिटिसिजम’ मा उनले लेखेका छन्, ‘अमेरिकी विश्वविद्यालय एउटा त्यस्तो सार्वजनिक वृत्तका रूपमा छ, जहाँ वैकल्पिक बौद्धिक अभ्यास सम्भव छ । यो स्तरको यस्तो संस्था दुनियाँमा कहीँ छैन ।’ कतिपय सन्दर्भमा विद्यार्थी स्वयं सामाजिक आन्दोलन र राजनीतिक क्रान्तिका अगुवा बने । नेपालमा भएका आन्दोलन र क्रान्तिहरूमा विद्यार्थीको भूमिका उत्तिकै स्मरणीय छ । ‘नयाँ नेपाल’ को परिकल्पना अघि सारेर आन्दोलनमा होमिएका विद्यार्थी कालान्तरमा कसरी मूलधारको राजनीतिमा आए भए भन्नेबारे मानवशास्त्री अमान्डा स्नेलिंगरले पुस्तक लेखिसकेकी छन् ।
सइदले आफ्नो पुस्तकमा अमेरिकी विश्वविद्यालयलाई वैकल्पिक चिन्तनको प्रशंसा गरिरहेका बेला अमेरिकी सरकार कथित आतंकवादविरुद्ध विश्वव्यापी अभियानमा थियो । सरकारी रवैयाका कारण अकल्पनीय धनजनको क्षति मात्रै सुरु भएको थिएन, अल्पसंख्यक मुस्लिमलगायत समुदायले उपेक्षा भोगिरहेका थिए । यस्तो सकसपूर्ण अवस्थामा समेत विश्वविद्यालयले आलोचनात्मक चिन्तन र अभ्यासलाई उकेरा लगाइरहेका थिए । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको भारतका केही विश्वविद्यालय गतिशील सार्वजनिक वृत्त बनेका छन् । हिन्दुवादी राष्ट्रवादको पारो बढेका बेला ती विश्वविद्यालय र एकाध सञ्चारमाध्यमले ‘र्‍यासनल–क्रिटिकल डिस्कोर्स’ का लागि ठाउँ बनाएका छन् । भारतीय सत्ताको भ्रमपूर्ण इतिहासचेत एवं उसका तमाम कमजोरीमाथि विवेचना गर्ने ठाउँ विश्वविद्यालय नै हुन् । प्रगतिशील सोच राख्ने विद्यार्थी संगठनहरू एवं सत्तासँग नडराउने शिक्षकहरूको पहलमा आलोचनात्मक चिन्तन र त्यसको बलमा विरोध प्रदर्शन जारी छन् ।
सार्वजनिक वृत्तसम्बन्धी सम्भवत: सबैभन्दा गहिरो अध्ययन गरेका दार्शनिक युर्गेन हाबरमास हुन् । उनले ‘र्‍यासनल–क्रिटिकल डिबेट्स’ का लागि जरुरी हुने सामाजिक परिस्थितिबारे समेत अध्ययन गरेका छन् । बृहत्तर समाजलाई असर गर्ने जुनसुकै विषयमा तथ्यपरक एवं वस्तुगत अन्तरक्रिया सम्भव तुल्याउनलाई खास सामाजिक अवस्था निर्माण हुनुपर्छ । व्यक्त भएका विचार, धारणा र प्रसार गरिएका सूचनामा निर्वाध अन्तरक्रिया गर्नका लागि विश्वविद्यालयमा त्यस्तो अवस्था निर्माण गर्न सहज हुन्छ । कुनै प्रायोजित प्रोपोगान्डा वा छलफलमा सहभागी मानिसका खास परिचयबाट वशीभूत नभई बिल्कुल तिनका तर्कमा आधारित भएर गरिने अन्तरक्रिया समाज बदल्ने ऊर्जा बन्न सक्छ । आहूतिको शब्दमा भन्दा समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने ल्याकत भएका बौद्धिकले ‘जीविकावाद’ भन्दा माथि उक्लेर कर्म गर्न पाउने प्रारम्भिक एउटा ठाउँ विश्वविद्यालय हुन सक्छ । यही विन्दुमा प्रश्न उठ्छ, के नेपाली विश्वविद्यालयहरू प्रभावकारी सार्वजनिक वृत्तका रूपमा विकास भएका छन् ? के हाम्रा विश्वविद्यालयमा ‘र्‍यासनल–क्रिटिकल’ डिस्कोर्सका लागि परिस्थिति निर्माण भएको छ ? विश्वविद्यालयमा भेला भएका नेपाली शिक्षक र विद्यार्थी खासमा के गर्दै छन् ? मूलधारका एक–एक दलका सदस्यका रूपमा विश्वविद्यालय पुगेका शिक्षक र विद्यार्थीबाट स्वतन्त्र चिन्तन कत्तिको सम्भव छ ? आफ्ना माउ पार्टी सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहेका बेला यी शिक्षक र विद्यार्थीले कति वस्तुगत अन्तरक्रिया गरिरहेका होलान् ? चरम दलीयकरणको बढ्दो प्रकोपले उनीहरू सम्बद्ध संस्था बेहाल भएको कति हेक्का राखेका होलान् ?
दलका कार्यकर्ताका रूपमा ‘पार्टी–काम’ को मुख्य उद्देश्य राखेर भर्ना भएका शिक्षक र विद्यार्थी स्वयं त्यस्ता औजार त भएका छैनन्, जसले हरेक महत्त्वपूर्ण विषयलाई अराजनीतिक लफ्फाजीमा पतित तुल्याइरहेको होस् ? स्रोत र शक्ति हत्याउन उपयोग हुने यन्त्रका रूपमा सिंगो विद्यार्थी र शिक्षक आन्दोलनको पतन हुनु आफैंमा आन्दोलनलाई अराजनीतिक बनाउनु होइन ? आफूलाई अझै ‘क्रान्तिकारी’ दाबी गरिरहेका शिक्षक र विद्यार्थीले यी विषयमा छलफल गर्ने ठाउँ स्वयं विश्वविद्यालय नभएर कहाँ हो ? यी बहसको प्रारम्भ गर्नसम्म डराउनु वा नचाहनु विश्वविद्यालय र हाम्रो सिंगो शिक्षा प्रणालीको त्रासदी होइन ?
सन् ९० को दशकयता हुर्केको नवउदारवादका दबाबले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई गाँजेको कसैबाट छिपेको छैन । संसारका ठूला भनिएका विश्वविद्यालयले समेत बजारको चरम दबाब झेलिरहेका छन् । नेपालका विश्वविद्यालयमा त्यस्तो दबाब अझै कचल्टिएर आइपुगेको छ । शिक्षालाई बिल्कुल बिकाउ कमोडिटीका रूपमा व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले सत्तामा रहेका र विश्वविद्यालयको नेतृत्व सम्हालेका सबैलाई नराम्ररी गाँजेको छ । माथि भनिए जस्तो बजारको एजेन्टका रूपमा विश्वविद्यालय पसेर अकण्टक दलाली गरिरहेका दलहरू नेपालका विश्वविद्यालयलाई हुर्कन नदिन प्रतिबद्ध छन् । सुदूर भविष्यसम्म विश्वविद्यालय उम्दा सार्वजनिक वृत्त बन्न सक्नेमा सन्देह छ । अध्ययन–अध्यापनमा गहिरो रुचि भएका र ठूलो यत्नबाट सफल भएका अल्पसंख्यक मानिस यहाँका विश्वविद्यालयमा अडिन सक्दैनन् । जाँगरिला विद्यार्थी र शिक्षक टिकाउन नसक्ने विश्वविद्यालयले नयाँ ज्ञान र समाजको प्रगतिलाई सघाउने दर्शन होइन, दलालीमार्फत जीविका चलाउने ‘जीविकावाद’ मात्र सिकाउँछ ।
अन्यत्र यस्ता समस्या भोगेका विश्वविद्यालयलाई त्राण दिन कुनै न कुनै विद्यार्थी वा शिक्षकको समूह तयार रहेको देखिन्छ । केही नभए शिक्षाबारे अनुसन्धान गरिरहेका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी वा शिक्षकले ‘कर्पोरेटाइजेसन’ जस्ता प्रक्रियाले शिक्षामा पारिरहेका असरबारे पुस्तक लेख्छन्, सार्वजनिक बहस गर्छन् । अमेरिका कनेक्टिकट विश्वविद्यालयकी समाजशास्त्री गेई टुचम्यानले एक बेनामे कर्पोरेट विश्वविद्यालयको अध्ययन गरेर अनेक कमजोरी उजागर गरिन् । उनले सो बेनामे विश्वविद्यालयलाई ‘वान्नाबी यू’ भनेकी छन् । ‘वान्नाबी’ भन्ने ‘स्ल्याङ’ शब्दले कुनै कुरा बन्ने लालसा भएको तर बन्न नसकेको अवस्थालाई जनाउँछ । ‘वल्र्ड र्‍यांकिङ’ लाई प्रभावित पार्न राम्रा भवन, ठूला कक्षाकोठा जस्ता अनेक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने त्यस्ता विश्वविद्यालयले शिक्षाको महत्त्वलाई केवल नाफासँग जोडेको र ज्ञान उत्पादनमा खासै भूमिका नखेलेको टुचम्यानले प्रमाणित गरिन् । पुस्तकमा एक प्राध्यापकलाई उद्धरण गर्दै भनिएको छ, ‘यहाँ अध्यापन गर्ने सवाल महत्त्वपूर्ण होइन, विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले राम्रो हेरचाह गरेको छ भन्ने भान दिने हो ।’ अर्थात् कुनै होटलमा पैसा तिरे बापत ग्राहकले पाउने ‘हेरचाह’ को सुविधा जस्तो सेवा प्रदान गर्ने ठाउँमा पतित भएको छ विश्वविद्यालय ।
विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न वा अध्यापनका लागि पुगेका युवा ‘पार्टी–काम’ का नाममा दलालीमा फँसे भने ज्ञान उत्पादनमा सरिक हुन सक्दैनन् । कुनै बजारु हेरचाह पाउने वा दिलाउने मनसुवा राखेर पुगेका युवाले पनि विश्वविद्यालयलाई उम्दा सार्वजनिक वृत्तका रूपमा हुर्काउन सक्दैनन् । समाजमा रहेका विविधता स्पष्ट झल्कने गरी विद्यार्थी र शिक्षक आउन सक्ने साथै बजार र पार्टी–कामको अतिरिक्त बोझले थिचिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सके विश्वविद्यालय समाजका लागि उपयोगी संस्था बन्छ । अनेक समस्याबाट गुज्रँदै गरेको दुनियाँलाई ती समस्याबाट मुक्त गराउन आवश्यक ज्ञानको खोजी ती संस्थाहरूबाट सम्भव हुन सक्छ ।
संसारभरि प्रसिद्ध रहेको अक्सफर्ड विश्वविद्यालय स्थापना हुनुभन्दा १५ वर्ष पहिले पाँचौं शताब्दीदेखि अनवरत सञ्चालित नालन्दा विश्वविद्यालय ध्वस्त बनाइएको थियो । सन् ११९० को दशकमा गरिएका अनेक आक्रमणले नालन्दा ध्वस्त बनाएको करिब एक दशकपछि मात्रै पश्चिमको अर्को प्रसिद्ध विश्वविद्यालय क्याम्ब्रिज खुलेको हो । अहिलेको बिहार राज्यमा पर्ने सो विश्वविद्यालयमा पाँचौं शताब्दीदेखि करिब सात सय वर्ष अनवरत अध्ययन–अध्यापनको काम गरियो । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनका अनुसार सो विश्वविद्यालयका भग्नावशेष उत्खनन् गर्दा त्यहाँ ठूला लेक्चर हल, लगभग नौ तलाको पुस्तकालय, कक्षाकोठा जस्ता संरचना फेला परेका थिए । अर्थात् पश्चिमभन्दा अघिदेखि पूर्वमा विश्वविद्यालयको संस्कृति सुरु भएको हो । यताका सभ्यता निर्माण गर्ने, ज्ञान परम्परा जोगाउने र समाजको प्रगतिमा योगदान गर्ने काममा नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशिलाजस्ता अनेकन् शिक्षालयहरूको ठूलो भूमिका थियो ।
मूलत: नयाँ पुस्तालाई समाजको चालक शक्ति बनाउन सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ विश्वविद्यालय हो । हामीसँग भएका संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र अध्ययन, चिन्तन, ज्ञान उत्पादन एवं प्रसारका गहकिला माध्यम बनाउन यही पुस्ताले सोच्न जरुरी छ । मौजुद विश्वविद्यालयहरूको पुन:संरचना अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि बलियो सामूहिक पहल जरुरी हुन्छ । लु सुनले भनेजस्तो ‘तन्नेरी ज्यानमा बूढा टाउका भएका सिल्लीहरू’ बाट यस्तो पहल सम्भव छैन । गहिरो सुझबुझ र विद्रोही तेवर भएको युवापुस्ताले सो जिम्मेवारी आफ्नो हो भन्ने महसुस गरे नेपालले नयाँ नालन्दा निर्माण गर्न सक्छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७५ १७:१३ / https://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/02/20/155066209422782117.html